Asomafo Nnwuma 19 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Asomafo Nnwuma 19:1-41
Paul wɔ Efeso; wɔn a wɔabɔ asu dedaw no, ebinom san bɔɔ asu bio (1-7)
Paul nkyerɛkyerɛ adwuma (8-10)
Nea ahonhommɔne yɛe nyinaa akyi, asɛm no sow aba (11-20)
Basabasayɛ kɔɔ so wɔ Efeso (21-41)
19 Ɛbae sɛ bere a Apolo+ wɔ Korinto no, Paul faa baabi a ɛmmɛn ɛpo, na ɔbaa* Efeso.+ Bere a oduu hɔ no, ohuu asuafo bi, 2 na obisaa wɔn sɛ: “Bere a mobɛyɛɛ gyidifo no, munyaa honhom kronkron anaa?”+ Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ei, yɛntee da sɛ honhom kronkron bi mpo wɔ baabi.” 3 Ɛnna obisaa wɔn sɛ: “Ɛnde, na mo asubɔ no yɛ asubɔ bɛn?” Wɔkae sɛ: “Yohane asubɔ.”+ 4 Paul kae sɛ: “Asu a Yohane bɔɔ nkurɔfo no, ɔbɔ de kyerɛe sɛ wɔasakra wɔn adwene,+ na ɔka kyerɛɛ nkurɔfo no sɛ wonnye nea odi n’akyi reba no nni.+ Ɔno ne Yesu.” 5 Bere a wɔtee eyi no, wɔbɔɔ wɔn asu wɔ Awurade Yesu din mu. 6 Na bere a Paul de ne nsa guu wɔn so no, honhom kronkron baa wɔn so,+ na wofii ase kaa kasa horow,* na wɔhyɛɛ nkɔm.+ 7 Ná wɔn nyinaa bɛyɛ mmarima 12. 8 Na abosome abiɛsa de, na ɔkɔ hyiadan mu+ de akokoduru ka asɛm, na na ɔne wɔn susuw Onyankopɔn Ahenni no ho+ sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛtɔ wɔn asom. 9 Nanso ebinom pirim wɔn koma, na wɔannye anni, na wɔkekaa Ɔkwan No+ ho nsɛmmɔne wɔ nnipadɔm no anim. Enti ɔtwee ne ho fii wɔn ho,+ na ɔde asuafo no kaa ne ho kɔe.* Na da biara, na ɔka asɛm wɔ Tirano sukuu dan no mu. 10 Eyi kɔɔ so mfe abien. Enti wɔn a wɔte Asia mpɔtam nyinaa, kyerɛ sɛ, Yudafo ne Greecefo nyinaa, tee Awurade asɛm no. 11 Na Onyankopɔn kɔɔ so faa Paul* so yɛɛ anwonwade akɛse.+ 12 Ɛno nti, nkurɔfo faa ntama ne ntaade a aka Paul nipadua kɔmaa ayarefo,+ na wɔn yare no gyaee, na ahonhommɔne no pue fii wɔn mu.+ 13 Yudafo a wokyinkyin tu ahonhommɔne no binom nso yɛe sɛ wɔbɛbɔ Awurade Yesu din agu wɔn a wɔwɔ ahonhommɔne no so. Asɛm a na wɔka ne sɛ: “Mehyɛ mo wɔ Yesu a Paul ka ne ho asɛm no din mu.”+ 14 Ná Yudani sɔfo panyin bi a wɔfrɛ no Skewa wɔ mma mmarima baason bi a na wɔreyɛ saa. 15 Ɛnna honhommɔne no ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Minim Yesu,+ ɛnna minim Paul,+ na mo nso mufi he?” 16 Ɛnna onipa a honhommɔne wɔ no so no tow hyɛɛ wɔn so, na odii wɔn so mmaako mmaako yɛɛ wɔn pasaa. Na wɔde adagyaw guan fii fie hɔ kɔe, na na wɔapirapira. 17 Obiara tee eyi ho asɛm, Yudafo ne Greecefo a wɔtete Efeso nyinaa. Na ehu kaa wɔn nyinaa, na nkurɔfo kɔɔ so kamfoo Awurade Yesu din. 18 Na wɔn a wɔagye adi no bebree bae, na wɔbɛkaa bɔne a wɔayɛ nyinaa wɔ baguam; wɔamfa biribiara ansie. 19 Nokwasɛm ne sɛ, wɔn a wodi asumansɛm no mu pii de wɔn nhoma bae, na wɔbɛhyew maa obiara hui.+ Na bere a wobuu ne nyinaa ano no, wohui sɛ ne bo yɛ nnwetɛbona 50,000. 20 Ɛno nti, Yehowa* asɛm nam ahoɔden so kɔɔ so trɛwee, na ase timii.+ 21 Eyinom akyi no, Paul yɛɛ n’adwene sɛ ɔbɛkɔ akɔfa Makedonia+ ne Akaia, na sɛ ofi hɔ a, ɔbɛkɔ Yerusalem.+ Ɔkae sɛ: “Sɛ midu hɔ a, ɛsɛ sɛ mekɔ Roma nso.”+ 22 Enti ɔsomaa wɔn a wɔsom no no mu baanu, Timoteo+ ne Erasto,+ kɔɔ Makedonia. Na ɔno ara de, ɔtenaa Asia mantam no mu kyɛe kakra. 23 Saa bere no, gyegyeegye bi a ɛkɔɔ so+ nyɛ asɛm ketewa. Ná ɛfa Ɔkwan No+ ho. 24 Ɛne sɛ, na obi wɔ hɔ a ɔyɛ dwetɛ ho adwuma* a wɔfrɛ no Demetrio. Ná ɔde dwetɛ yɛ Artemi abosom dan, na na ɛma nkurɔfo a wɔn nso yɛ dwetɛ ho adwuma no nya mfaso pii.+ 25 Ɔboaboaa wɔne nkurɔfo a wɔyɛ nnwuma a ɛtete saa no ano, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mmarima, mo ara munim yiye sɛ adwuma yi na ɛma yenya yɛn ho. 26 Seesei moahu na moate sɛ, ɛnyɛ Efeso+ nko ara na saa Paul yi adan nnipadɔm pii adwene ama wɔanya adwene foforo. Mmom ɛreyɛ ayɛ sɛ, Asia mantam nyinaa mu nso, wayɛ saa ara. Na ɔka sɛ anyame a wɔde nsa ayɛ no nyɛ anyame.+ 27 Nea ɛhaw adwene koraa ne sɛ, nea ɔreyɛ no bɛma nkurɔfo akeka yɛn adwuma no ho asɛmmɔne, na onyamebea kɛse Artemi asɔrefi no nso, nkurɔfo remfa nyɛ hwee bio. Na Artemi a Asia mantam ne asaase sofo nyinaa som no no, n’anuonyam bɛbɔ no.” 28 Bere a nkurɔfo no tee eyi no, wɔn bo fuwii, na wofii ase teɛteɛɛm sɛ: “Efesofo Artemi yɛ ɔkɛse!” 29 Enti kurom hɔ nyinaa yɛɛ bagyabagya, na wɔn nyinaa gyee bum kɔɔ agohwɛbea hɔ. Bere a wɔrekɔ hɔ no, wɔtwee Makedoniafo bi a wɔn din de Gaio ne Aristarko+ a wɔne Paul tutu akwan no kaa wɔn ho. 30 Paul de, na ɔpɛ sɛ ɔkɔ nnipa no mu, nanso asuafo no amma no kwan. 31 Mpanyimfo a wɔhwɛ afahyɛ ne agodi so no mu binom a na wɔpɛ n’asɛm no mpo soma bɛsrɛɛ no sɛ, ɔnnkɔ agohwɛbea hɔ, na asiane bi anto no. 32 Nokwasɛm ne sɛ, sɛ ebinom teɛm ka sɛɛ a, na ebinom nso ateɛm aka sɛɛ, efisɛ na nnipadɔm no ayɛ bagyabagya, na na wɔn mu dodow no ara nnim nea enti a wɔabehyiam. 33 Ɛnna wɔmaa Aleksandro fii nnipadɔm no mu pue bae, na Yudafo no piapiaa no baa anim. Na Aleksandro him ne nsa sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ n’asɛm mu kyerɛ nkurɔfo no. 34 Nanso bere a wohui sɛ ɔyɛ Yudani no, wɔn nyinaa boom teɛteɛɛm bɛyɛ nnɔnhwerew abien sɛ: “Efesofo Artemi yɛ ɔkɛse!” 35 Bere a kurow no kyerɛwfo tumi maa nnipadɔm no yɛɛ komm no, ɔkae sɛ: “Efeso mmarima, onipa bɛn na onnim sɛ Efesofo kurow yi na ɛhwɛ Artemi ɔkɛse no ne ohoni a efi soro bae no asɔredan so? 36 Obiara ntumi nnye eyinom ho akyinnye, enti monyɛ komm, na mommpere mo ho nnyɛ biribiara. 37 Efisɛ mmarima a mode wɔn aba ha yi nwiaa asɔredan mu nneɛma, na wɔnkaa yɛn nyamebea no ho abususɛm biara. 38 Enti sɛ Demetrio+ ne wɔn a ɛka ne ho a wɔyɛ dwetɛ ho adwuma no ne obi wɔ asɛm a, nna a wodi asɛm wɔ hɔ, ɛnna amantam asoafo* nso wɔ hɔ. Sɛ obi wɔ asɛm tia ne yɔnko a, ɔmfa mmra. 39 Nanso sɛ morepɛ biribi foforo aka ho a, ɛnde gye sɛ mpanyimfo no frɛ ɔmanfo no hyiam, na wosi ho gyinae. 40 Na nea asi nnɛ yi nti, anhwɛ a wɔbɛbɔ yɛn sobo sɛ yɛyɛ amammɔfo, efisɛ basabasa a yɛreyɛ yi, yenni nnyinaso biara.” 41 Bere a ɔkaa saa no, ɔmaa nnipadɔm a abehyia no kɔe.
^ Anaa “osian baa.”
^ Anaa “kasa foforo.”
^ Anaa “oyii asuafo no fii wɔn mu.”
^ Anaa “Paul nsa.”
^ Anaa “dwetɛ dwumfo.”
^ Ná ɔmantam soafo yɛ ɔpanyin a ɔhwɛ Roma mantam bi so. Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Asomafo Nnwuma 19